Tababarka 1e Heerka Sare - GO! DUGSIGA SPECTRUM (BULSHADA TALAABADA // B-STREAM // CAMPUS RUGGEVELD)
1 heerka warshadaha
spectrum School > koorsooyinka our > 1e Degree Warshadaha > 1e Degree Warshadaha
tababarka Barashada + Xirfadaha (B-socodka) ee GO! Spectrumschool, Ruggeveld Campus
ah Shahaadada 1e degree B-stream Industry Waxaad dhadhan kartaa lakabyo kala duwan sida farsamoyaqaanada, birta, korontada, qoryaha, iwm. Sidan ayaad u dooran kartaa doorashada saxda ah ee koorsada warshadaha ee shahaadada 2e.
In Sanadka 1e waxaad heshaa qayb ballaadhan oo ah waxbarashada guud ee aasaasiga ah oo isku mid ah qof walba. Intaa waxaa dheer, waxaad wax badan ka baran doontaa farsamada. In Sanadka 2e Waxaad baran kartaa farsamooyin kala duwan sida farsamooyinka, birta, korontada, qoryaha, iwm. Waxaad baraneysaa faylasha, googoynta, dharka, laabta, sawirada, ... Waxaad baraneysaa inaad cabirto, calaamadiso oo aad doorato oo aad isticmaasho qalabka saxda ah. Waxaa intaa dheer inaad baraneysid (de) qalabyada fiyuusyada iyo fiyuusyada ku qoran sanduuqa fudud. Waxaad baraneysaa inaad fahamto jaantusyada korantada sahlan oo aad fahamto qorshooyinka. Waxaad baraneysaa inaad dib u soo celiso qalabka korontada si habsami leh.
Waxaad jeceshahay inaad la shaqeyso gacmahaaga
Waxaad jeceshahay inaad ku shaqeyso qalab
Waxaad doonaysaa inaad noqoto qof xirfadle ah
Ma jeceshahay inaad la shaqeyso gacmahaaga? Maadaama aad jeceshahay xirfaddaada? Miyaad tahay mid farsamo ah oo farsamo ahaan loo sameeyay?
Inaad awood u yeelatid iyo inaad diyaar u tahay inaad la shaqeyso gacmahaaga waa muhiim, sababtoo ah waxaad baraneysaa intaad sameyneyso, halkii aad ka soo qaadan lahayd buugaagta. Dhalinyarada aan helin shahaadadooda waxbarashada aasaasiga ah ayaa wali gaari kara haddii ay ku aflaxaan 1e sanadka B-da.
Ma ku guulaysatay sanadka 2e? Markaas waxaad bilaabi kartaa shahaadada 2e BSO. Isbedelka 1A sidoo kale waa suurtogal. Shahaadada warshadaha ee 1e waa tababarka hordhaca ah ee koorsooyinka soo socda: Korontada, Farsamoyaqaan auto, Mashiinka Mashiinka Aasaasiga ah & alwaax
Kala tasho jadwalka casharka Shahaadada 1e degree B-stream Industry:
Sannadka 1e ee kooban (35KB, .pdf)
Sannadka 2e ee kooban (37KB, .pdf)